what, when, why: तपाईंको मोबाइलमा पनि भाइरस छ कि ? चेक गरौ है ...
तपाईंको मोबाइलमा पनि भाइरस छ कि ? चेक गरौ है ...
तपाईंको मोबाइलमा पनि भाइरस छ कि ? लौ check गरी हाल्नुस् है ...
तपाईंको मोबाइल सुरक्षित छ ?' नेपाल टेलिकमका अनुसार मुलुकमा चलिरहेका मोबाइलमध्ये २२ हजारभन्दा बढी भाइरसले ग्रस्त छन् । त्यसमा तपाईंको पनि पर्न सक्छ । यो संख्या दिनहुँ बढिरहेकाले बेलैमा उपचार खोज्नु राम्रो । नेपाल टेलिकमले हालै यसको समाधान ल्याएको छ । टेलिकमले वेबसाइट http://www.ntc.net.np/ मा आफैं सातवटा अन्तर्राष्ट्रिय नम्बरमा लगातार एसएमएस पठाइदिने 'हातीहातीडटए' भाइरस लागेका सयौ मोबाइलको सूची वेबसाइटमा प्रकाशित गरेको छ ।
...........................................................................तपाईं पनि आफ्नो मोबाईलमा कतै भाईरस त लागेको छैन check गर्ने होइन त ? लौ गरी हाल्नुस् है नत्र तपाईंको मोबाईलमा भरिएको पैसा सबै भाईरसले स्वातै सक्याईदेला नि । भाईरसले सँक्रमित मोबाईल नम्बरहरुमा आफ्नो नम्बर छ कि छैन check गर्न यहाँ क्लिक गर्नु होला । भाइरस लागेको मोबाइल फम्र्याटिङ नगरी सुरक्षित हुँदैन । उपचारका लागि टेलिकमले कहाँ सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने भन्ने बारेमा सोचिरहेको नजाएको छ ।
लौ टेलिकमले छिट्टै यो केन्द्र स्थापना गरोस र भाईरस पीडित मोबाइल प्रयोग कर्ताले राहत पाउन यहि कामना गरौ ।
information ko lagi thanks hai...
maile mero mobile maa virus chha ki chhaina bhanera check gare... thanks bro. link ko laagi